Otu esi ada ada na Snapchat | Martech Zone
Otu esi ada ada na Snapchat
Fraịdee, Nọvemba 18, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Chris Gomersall
Ulo ahia na-agbasi ike Ntinye Snapchat maka IPO na igba egbe nke Nlegharị anya (ihu ọma ihe niile Google Glass abụghị). Ma ịkpọtụ aha Snapchat ka nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ahịa. Ka ọ dịgodị, tweens, ndị nọ n'afọ iri na ụma na, ị chepụtara ya, Millennials na-adọpụ obere obi ha. Ọ dị ka a ga - asị na naanị mgbe ụdị dị iche iche na - enweta ikpo okwu ntanetị ọhụụ, a na - ewebata ha na onye ọzọ - ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala ọrụ ọhụrụ nke otu dị.
Ka anyị lelee ụfọdụ ọnụọgụ Snap:
@Snapchat na-anata ihe elere anya elekere iri kwa ụbọchị ma si na ijeri abụọ ruo ihe karịrị ijeri vidiyo 10 kwa ụbọchị n'otu afọ
60% nke ndị ọrụ ama niile na-eji ngwa @Snapchat
25-30 nkeji bụ nkezi Snapchat iji oge kwa ụbọchị
Ihe karịrị 50% nke ndị ọrụ ọhụụ kwa ụbọchị bụ 25 na karịa
Ndị ọrụ Facebook na-akwaga na ikpo okwu ọhụrụ na ìgwè
Naanị afọ ise, Snapchat etolitela ịbụ nke atọ kachasị nwee mmekọrịta mmadụ na ibe - ọ ka na-eto eto
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụdị na-ekweta na ha kwesịrị nọrọ na Snapchat, ọkachasị nye stats na agbapụ n'azụ uto ya na ojiji ya, ịdị na mbara igwe dị iche karịa iji ikpo okwu. Echiche nke Snapchat bụ sexy nye ndị ahịa, mana nke ahụ bụ ebe ọ na-agwụ. Eziokwu na-egbu mgbu bụ na ndị na-ere ahịa amaghị ebe ha ga-ebido ma a bịa na Snapchat.
Isi ihe na-eme iji zere Snapchat ida bụ ịmịnye ya na ngalaba mgbasa ozi ọha na eze, ebe ọ nwere ọtụtụ nuances nke na-eme ka ọ dị iche karịa Facebook, Twitter ma ọ bụ Instagram. Isi onyinye Snapchat na-eme ka ọ dị iche na nyiwe atọ a.
Ọ bụrụ na ụdị dị iche iche na-anwa itinye Snapchat n'ime usoro mgbasa ozi mmekọrịta ha ma weghachite ọdịnaya maka Twitter, Facebook, Youtube ma ọ bụ Instagram, ha ga-ada.
Ndị a bụ ụzọ anọ iji merie na Snapchat
Denye ọdịnaya na Snapchat ndị ọrụ enweghị ike ịchọta ebe ọzọ - Snapchat ọdịnaya kwesịrị ịpụta Snapchat nanị ọdịnaya. Ndị ahịa chọrọ ịnweta ozi ọhụụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ enweghị. Na-agwụcha ihe ndị dị na ya ma na-arụ ọrụ nke ọma na echiche nke iche. Ndị ọrụ enweghị ike ịkekọrịta ihe na-adịkwaghị, nke pụtara na ọdịnaya ahụ bụ naanị ndị ọrụ Snapchat. Were, dịka ọmụmaatụ, otu Ford na-eji Snapchat eme ihe ịkpọsa a ọhụrụ subcompact SUV dị nnọọ urua. Mgbasa ozi ahụ, bụ nke ezubere iche ndị ọkwọ ụgbọala na narị afọ iri, gosipụtara Snapchat star DJ Khaled na ebe aghụghọ na-adọba ụgbọala na nso Hollywood Boulevard na Hollywood, California.
Jiri ọdịnaya kubie ume iji mepụta ngwa ngwa - Otu n'ime ihe kachasị iche na Snapchat bụ ịnwe ọdịnaya. Ikwe ka ọdịnaya mebie, ma ọ bụ laa n'iyi mgbe oge akọwapụtara, na-emegide mmụọ nke ọtụtụ ndị ọkachamara n'ahịa. Kedu ihe kpatara eji kee ihe naanị ka ọ pụọ? Ikwe ka ọdịnaya mebie na -emepụta echiche nke ịdị ngwa na ndị na-azụ ahịa. Ọ bụ ihe kacha mkpa “mee ugbu a.” Maka akara, inye ọdịnaya na-arụ ọrụ n'ime ụbọchị njedebe ga-agba ndị na-azụ ahịa ume ime ngwa ngwa ma sonye ngwa ngwa.
Jiri obere oge nzacha jikọọ na ụmụazụ - N'oge na-adịbeghị anya, ụdị amalitela inye obere oge ma ọ bụ jiri nzacha Snapchat. Ọ bụghị naanị na nka a na-arụ ọrụ n'ime echiche ọdịnaya nke Snapchat na-agwụ, ọ na-enyekwa ohere ụdị njikọta na ndị ọrụ na-eso ha, yana ndị na-eso ụzọ ndị ọzọ ahụ. Na Septemba 2016, Bloomingdale malitere Snapchat geofiltered "scavenger hunts" iji kwalite ọdịda uwe. Ndị ahịa Bloomingdale chọrọ nza nzacha zoro ezo na ụlọ ahịa mpaghara niile n'ofe mba ahụ iji nweta ihe nrite. Asọmpi ahụ gbara naanị ụbọchị atọ - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ millisecond na usoro ahịa. Brandsdị ndị ọzọ ejirila obere oge nzacha iji kwalite azụmahịa ma ọ bụ onyinye pụrụ iche, ma ọ bụ naanị iji mee ka mmatawanye ọkwa. Ihe niile bụ ụzọ dị mma maka akara iji jiri Snapchat.
Bụrụ eziokwu - Ndị ahịa taa nwere ike ịchọpụta na a na-ere ha ahịa otu kilomita. Ha chọrọ ịmalite mmekọrịta na ụdị ndị ha na-eji. Ọ bụrụ na ị na-atụle ịkwalite akara gị site na Snapchat, ị kwesịrị ịdị na-eri ihe dị ka Snapchat ọdịnaya dịka ị nwere ike. Nke a ga - enyere gị aka metụtara ndị na - ege gị ntị lekwasịrị anya ma kesaa ọdịnaya dị ha mkpa. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ Snapchat na-agbagharị na-eto eto, uto nke ikpo okwu kwesịrị ịbụ ezuru ndị ahịa iji debe ya na radar.
N'ihe banyere Snapchat, ajụjụ a abụghị “ka anyị kwesịrị?” Ma “otú ànyị kwesịrị? ”
Tags: authenticnzachasnapchatsnapchat nzachaihe ngosi
Chris Gomersall bu onye nchoputa na onye isi nke Na-atụgharị uche, Ulo oru ngwanrọ ahia na Atlanta, GA. Na mbu, Chris bụ Creative Strategist na Facebook na Instagram ebe ọ rụkọtara ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ kachasị elu n'ụwa, gbara akwụkwọ ikikere, soro ndị ọkà mmụta banyere mmadụ na ndị ọkà mmụta sayensị na-arụkọ ọrụ, wuru prototypes na ndị injinia, na-eduga bootcamps mbipụta akwụkwọ, na ndị ọzọ. Na mbu mbu ndu na Moxie, ụlọ ọrụ ndị ọzọ gụnyere Euro RSCG (DSW), Mpụga na Asaa (.Comlọ ọrụ.com), na mbido nke ya.